Ny fiainana miaraka amin'i Kristy Jesosy
Fa isika tsy mitolona amin’ny nofo aman-drà, fa amin’ny fanapahana sy amin’ny fanjakana sy amin’ny mpanjakan’izao fahamaizinana izao, dia amin’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra [Gr. lanitra]. Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian’Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin’ ny andro mahory ; ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra hianareo. Efesiana 6:12-13
Ny tsapa dia rehefa manapa-kevitra ny hivavaka sy hanompo ny Tompo ny olona iray dia miseho daholo izao karazana sakana izao mba tsy hampandroso anao. Voamarina tokoa ny tenin'ny Tompo fa tery ny lalana. Ao amin'ny Matio 24:22 dia milaza hoe : Ary raha tsy efa nohafohezina izany andro izany, dia tsy nisy nofo hovonjena... Ary tena ezahan'ny devoly mihitsy ny hampihemotra antsika na amin'ny fomba ahoana izany na amin'ny fomba ahoana. Isika no aoka tsy hihemotra mihitsy satria marina ny Tompontsika.
Izao torolalana izao dia atolotra mba hahafahanareo mandresy izany karazana sakantsakana ataon'ny devoly izany.
Eny, hatramin'izany andro izany Izaho no Izy, Ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako ; Miasa Aho, ka iza moa no mahasakana izany ? Isaia 43:13
Misy Tenin'ny Tompo manao hoe : " Eny, hatramin’izany andro izany Izaho no Izy, Ary tsy misy maharombaka amin’ny tanako ; Miasa Aho, ka iza moa no mahasakana izany ? " Isaia 43:13. Tena eo am-pelatanan'Andriamanitra tokoa ve ianao ? Raha tena eo am-pelatanan'Andriamanitra tokoa mantsy ianao dia tsy hisy haharombaka anao, fa aza matahotra na inona na inona olana miseho. Manokatra lalana ho anao hatrany ny Tompo.
Dingana 2 amin'ny fanarahana an'i Kristy :
1- Dingan'ny zanaka mpangataka :
Raha miray amiko hianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany. Jaona 15:7
Zanak'Andriamanitra mpangataka no tiana resahana eto. Jesosy ao amin'ny Filazantsara efatra dia nampianatra hangataka. Ny fepetra dia tsy maintsy ZANAKA aloha vao afaka mangataka. Voalaza ao amin'ny Jaona 15:7 fa : " Raha miray amiko hianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany. " Io firaisana amin'Andriamanitra io no mahatonga ny olona iray ho ZANAKA. Tsy mihaino ny mpanota sy ny mpakasitraka ota mantsy Andriamanitra (Jereo Jaona 9:31, Salamo 66:18, Jakoba 4:3). Eto amin'ity dingana ity dia mangataka izay zavatra tiany ny zanaka na inona izany na inona (vola, trano, asa sns ...) Tsy misy maharatsy izany fa dingana lalovana ihany izany. Andriamanitra nefa tsy manome afa-tsy izay zavatra mahasoa ny zanany ihany. Izany hoe tsy izay rehetra angatahina dia tsy maintsy ho azo avokoa.
2 - Dingan'ny zanaka manoa :
Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany. Jeremia 29:11
" tahaka ny zanaka manoa, tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin’ny tsi-fahalalanareo ; " 1Petera 1:14. Ity dingana ity dia dingan'ny fiadanana izay tian'Andriamanitra iainantsika zanany. Toe-panahy feno fankatoavana sy manaiky ny fitondran'Andriamanitra. Tsy mangataka intsony eto fa miaina amin'ny fankatoavana ny Tenin'Andriamanitra. Fantany mantsy izay hieverany ny zanany. " Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany. " Jeremia 29:11. Tsy voatery hilamina hatrany izany fiainana miaraka amin'i Jesosy izany. Jereo ny tantaran-dry Sadraka sy Mesaka ary Abednego izay nalefa tao anaty lafaoro, ny tantaran'i Daniela tao an-davaky ny liona, ny tantaran'i Josefa, ny tantaran'i Paoly... ireo olona ireo dia tsy nangataka intsony rehefa niatrika olana fa niandry ny fitondran'Andriamanitra.
Ny toe-panahin'ny zanaka manoa :
- Manaiky am-pinoana ny fitondran'Andriamanitra ny fiainana,
- Manantena ny famindram-po sy fahasoavany amin'ny zavatra rehetra,
- Miandry amin'ny fanantenana sy amin'ny faharetana ny fitondran'Andriamanitra izay mahatoky,
- Mifaly ao amin'ny Tompo, midera sy mankalaza eo am-piandrasana.